MZB FAMILY - Page 746 of 860 - Online Daily
ဘိုဘိုဟန် သီချင်းလေးကို အသံချိုချိုလေး နဲ့ ပြန်သီဆိုထားခဲ့ တဲ့ မိုးဟေကို ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
မင်းသမီးချောလေးမိုးဟေကိုကတော့ အနုပညာလောက မှာ နေရာတစ်ခုကို ရယူထား နိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ များစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေရှေ့ …
လက်ရှိ အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေ တဲ့ မမ ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ မတော်လိုက် ရ တဲ့ ရည်းစားအကြောင်း သေချာရှင်းပြခဲ့တဲ့ အိမ့်ချစ်
လက်ရှိ အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေ တဲ့ မမ ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ မတော်လိုက် ရ တဲ့ ရည်းစားအကြောင်း သေချာရှင်းပြခဲ့တဲ့ အိမ့်ချစ် သ ရုပ်ဆောင် ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းကတော့ လက်ရှိ ပရိသတ်တွေကြားမှာ စိတ်ဝင်စားခံနေရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါပဲ။ သတင်းမီဒီယာမဟုတ်တဲ့ ပေ့ခ်ျတစ်ခုကနေပြီး ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းရဲ့ အင်တာဗျူးဗီဒီယိုတွေကို စုစည်းပြီး ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းရဲ့ချစ်သူဟာ ဆရာဝန်လား? စစ်ဗိုလ်လား? ဘောလုံးဥက္ကဌလား? ဆိုပြီးတော့ …
မိခင်ဖြစ်သူ ကို တန်ဖိုးကြီး စိန် လော့ကတ် တစ်ခု မွေးနေ့ လက်ဆောင် ပေးခဲ့တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
မိခင်ဖြစ်သူ ကို တန်ဖိုးကြီး စိန် လော့ကတ် တစ်ခု မွေးနေ့ လက်ဆောင် ပေးခဲ့တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ထူးခြား တဲ့ အသံပိုင်ရှင် လေး ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဟာ ပရိသတ်ရဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ တိုက်ညီတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေကို သီဆိုတတ်သူတစ်ဦးပါပဲ။ ဝိုင်းစုရဲ့ သီချင်းလေးတွေကို လူကြီး လူ ငယ်မရွေး ကြိုက်နှစ်သက်ကြတာ ဖြစ်ပြီး အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာ ဝိုင်းစုကို အားပေးကြတဲ့ …
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဥပဒေ မကောင်းခဲ့လို့ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ရောက်ခဲ့ရတယ်….ဒါကို အခု ပြင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်…. ဥပဒေ မကောင်းခဲ့လို အာဏာရှင်တွေ ဝိသမ လောဘသမားတွေ လာဘ်ပေးသူ လာဘ်ယူသူတွေ ကြီးစိုးပြီး ချမ်းသာတဲ့သူတွေက ချမ်းသာသထက် ချမ်းသာပြီး ပြည်သူတွေက ဆင်းရဲသထက် ဆင်းရဲလာတယ်… တကယ်တော့….ဥပဒေပြင်ယုံနဲ့နည်းနည်းပဲပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ် ဥပဒေပြင်ပြီးတာတောင် အာဏာရှင်တွေ အာဏာရူးတွေ ဝိသမ လောဘ တွေ နဲ …
အဆိုတျော သရုပျဆောငျ တငျ့တငျ့ထှနျး ဆရာလေး နန်ဒမာလာ ကှယျလှနျဆိုသညျ့သတငျးမှာ မှားယှငျး
ဆုတောငျးပွညျ့သှားပွီ အဆိုတျော သရုပျဆောငျ တငျ့တငျ့ထှနျး(ဆရာလေး နန်ဒမာလာ)ကှယျလှနျဆိုသညျ့သတငျးမှာ မှားယှငျးတဲ့ အဆိုတျော သရုပျဆောငျ တငျ့တငျ့ထှနျး(ဆရာလေး နန်ဒမာလာ)ကှယျလှနျဆိုသညျ့သတငျးမှာ မှားယှငျး ပရိတျသတျအခဈြတျော အဆိုတျော သရုပျဆောငျ တငျ့တငျ့ထှနျး(ဆရာလေး နန်ဒမာလာ)ကှယျလှနျဆိုသညျ့သတငျးမှာ သတငျးမှားသာဖွဈကွောငျးသိရ “ပရိတျသတျအခဈြတျော အဆိုတျော သရုပျဆောငျတငျ့တငျ့ထှနျး(ဆရာလေး နန်ဒမာလာ)သညျ ဘုတလငျမွို့ ကွောငျပနျးတောရကြောငျးတိုကျ သီလရှငျကြောငျးတှငျ ယနေ့(၉)နာရီ အခြိနျခနျ့တှငျ ၉၆ ပါးရောဂါဖွငျ့ အသကျ(၅၆) နှဈအရှယျတှငျ …
ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တိုင်း အူတက်အောင် ရယ်မောနေရမယ့် ဖိုက်စတား လူရွှင်တော်အဖွဲ့နဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဟာသဗီဒီယို
ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး စိတ်စေတနာထက်သန်သူ ​ဖေ့ဘုတ် ဆယ်လီမလေုးဖြူဖြူထွေးကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖြူဖြူထွေးကတော့ ရိုးသားပြီး သူမချစ်တဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရဖို့အတွက် ရိုးရှင်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးတွေနဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိမှာတော့ ကြော်ငြာတွေကို လက်ခံရိုက်ကူးနေရကာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုပါ ရိုက်ကူးနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရှာလို့ရတဲ့ အနုပညာကြေးတွေထဲကနေ သူမရဲ့ မွေးရပ်မြေ ရွာလေးအတွက် အကျိုးပြု အလုပ်လေးတွေကို …
အမေ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်ကြလဲဆိုတာ ပြသလိုက်တဲ့ ​ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့က ​ရွှေပန်းထိမ်ဆရာ
အမေ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်ကြလဲဆိုတာ ​ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့က ​ရွှေပန်းထိမ်ဆရာ အနုစိတ်လုပ်ထားတဲ့ အမေ့ပုံရွှေဆွဲသီးလေးပါတဲ့။ ကျက်သရေရှိလိုက်တာ ပန်းထိမ်ဆရာကိုလည်း ​လေးစားပါတယ်။ ​ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့က ​ရွှေပန်းထိမ်ဆရာကို လေးစားပါတယ်။ အနုစိတ်လုပ်ထားတဲ့ အမေ့ပုံရွှေဆွဲသီးလေးပါတဲ့ အမေ့ကိုဘယ်လောက် ချစ်ကြလဲဆိုတာပုံ​လေးကိုသာ ကြည့်လိုက်ပါ​တော့ဗျာ သိပ်ကို ကျက်သရေရှိလိုက်တာဗျာ။ ခရက်ဒစ် ယူနီကုဒျဖွငျ့ ဖတျရနျ အမကေို့ဘယျလောကျခဈြကွလဲဆိုတာ ကြောကျပနျးတောငျးမွို့က ရှပေနျးထိမျဆရာ အနုစိတျလုပျထားတဲ့ အမပေုံ့ရှဆှေဲသီးလေးပါတဲ့။ ကကျြသရရှေိလိုကျတာ ပနျးထိမျဆရာကိုလညျး လေးစားပါတယျ။ ကြောကျပနျးတောငျးမွို့က …
မသန်စွမ်းဖြစ်နေသော ၄ နှစ်သားအရွယ် ညီငယ်လေးကို ချီပိုးထားရင်း ကျောင်းတက်နေရတဲ့ မိဘမဲ့ကလေးငယ်လေး
မသန်စွမ်းဖြစ်နေတဲ့ ၄ နှစ်သားအရွယ် ညီငယ်လေးကို ချီပိုးရင်း ကျောင်းတက်နေရတဲ့ ကလေးငယ်။ ၁၁ နှစ်ကလေးအများစုမှာတော့ အပူပင်မရှိ ကျောင်းတက်နိုင် သူငယ်ချင်းတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆော့ကစားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီကလေးလေးကတော့ သူရဲ့ မသန်စွမ်းဖြစ်နေတဲ့ ၄ နှစ်သားအရွယ် ညီငယ်လေးကို ချီပိုးရင်း ကျောင်းတက်နေရတာပါ။သူ့သူငယ်ချင်းတွေဆော့ကစားနေတာကို ငေးမောကြည့်နေယုံကလွဲပြီး သူ့ရဲ့ မသန်စွမ်းညီငယ်လေးကို ဂရုတစိုက် ပြုစုနေရလို့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်မကစားနိုင်ရှာပါဘူး။ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးအမည်ကတော့ အဲလစ်ပီရဲတာ …
သူမ Work outလုပ်နေချိန် အနှောင့်ယှက်လုပ်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ မေမေချောရတနာ
ဆယ်စုနှစ်ကျော်တဲ့အထိတောင် အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ချောရတနာကို ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ချောရတနာကတော့ ဇာတ်ကားတိုင်းရဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့် အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်ထုတစ်ဆုကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တဲ့သူတစ်ဦးပါပဲနော်။ ချောရတနာကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ သားနဲ့သမီးတို့တွေနဲ့အတူ သာယာတဲ့မိသားစုဘေဝလးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့သားနဲ့သမီးတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အခ်စ္ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ဦးပါပဲနော်။ ဒီနေ့မှာလည်း ချောရတနာကအနှောင့်လေးတွေလို့ဆိုပြီး သူမwork …
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ခေတ်စားနေ တဲ့ မမဆောင်းနဲ့ ပတ်သက် ဟာသဗွီဒီယိုလေး တစ်ခုလုပ် လိုက် တဲ့ ကိုပေါက်
ပရိသတ်ကြီးရေ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ် သလို ပရိသတ်ကို အကြိုက်တွေ့စေခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် ကိုတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးတွေကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အထူး အားပေးမှုကို အခိုင်မာရရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုပေါက် ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဆွယ်စုံရ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်…။ ကိုပေါက် ဟာ ဆိုရင် အမြဲလိုလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် …
Previous 1 … 745 746 747 … 860 Next